R/wasaare Gaas oo odoyaasha dhaqanka ka codsaday in lasoo de dejiyo baarlamaanka cusub | goboladaradio.com	Saturday, May 18th, 2013	Home
R/wasaare Gaas oo odoyaasha dhaqanka ka codsaday in lasoo de dejiyo baarlamaanka cusub
Published on August 7, 2012 by daahir faarax · No Comments Published on August 7, 2012 by Dayax (Gobolada Radio) C/wale maxamed cali gaas Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda KMG Soomaaliya ayaa ugu baaqay Odayaasha dhaqanka in lasoo de dejiyo Liiska Xildhibaanada cusub ee badalaya kuwa haatan jira uuna sii idlaanayo waqtigooda.
Dr Gaas Casho sharaf oo uu u sameeyay Odayaasha dhaqanka ayaa waxa uu ugu baaqay Odayaasha dhaqanka inay soo de dejiyaan Liiska Xildhibaanada cusub ee barlamanka Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga gudbo xilliga Kalaguurka islamarkaana loo tallaabo dowlad cusub, isagoo Odayaasha dhaqanka kula ballamay inay soo xullaan Xildhibaano leh aqoon iyo karti ay waxna u qaban kara Soomaaliya.
Mas’uuliyiinta Dowladda KMG Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe kullamo la qadanayay Odayaasha dhaqanka kuwaasi oo ka dalbanayay ansixinta Dastuurka kaddib inay soo de dejiyaan Xildhibaanada cusub ee barlamanka Soomalaiya.
War Deg Deg ah: Kulan ay irduhu uxir
Mid ka mid ah Ergadii shirkii Kismaa
Kenya oo sheegay inay ciidamo hor le
Kismaayo oo maanta lagu wado inay t
Gudi Xukuumadu ay u xilsaartay arima
(Oct 26, 2012 Goboladaradio) Fagaaraha Weyn ee ku yaala Afaafka hore ee Xarunta Madaxtooyada Maamul goboleedka Ximan iyo Xeeb ...	website tracking